ESI MEE KA ONYE NRỤZI TENDA - NGWA - 2019
Ịhazi onye nrụzi Tenda
Ọ bụrụ na ị zụtara ihe nbipute ọhụrụ, mgbe mbụ, ịchọrọ ịtọ ya ya n'ụzọ ziri ezi. Ma ọ bụghị ya, ngwaọrụ ahụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, ma mgbe ụfọdụ anaghị arụ ọrụ ma ọlị. Ya mere, n'isiokwu taa, anyị ga-elele ebe ị ga-ebudata na otu esi arụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Epson Stylus TX117 MFPs.
Ịwụnye ngwanrọ na Epson TX117
E nwere nnọọ otu ụzọ ị nwere ike isi wụnye ngwanrọ maka ihe nbipị a kapịrị ọnụ. Anyị ga-atụle ụzọ kachasị ewu ewu ma dị irè nke ntinye ngwanrọ, ma ị họrọla nke kachasị mma maka gị.
Usoro 1: Nchịkọta Akaụntụ
N'ezie, anyị ga-amalite ọchụchọ nke ngwanrọ site na saịtị ọrụ, dịka nke a bụ ụzọ kachasị dị irè. Tụkwasị na nke ahụ, mgbe ị na-ebudata ngwanrọ site na ebe nrụọrụ weebụ nke onye ọrụ ahụ, ị ​​gaghị etinye aka na ibudata ọ bụla malware.
Gaa na ebe obibi nke saịtị ọrụ ahụ na njikọ aha a kapịrị ọnụ.
Mgbe ahụ na isi mmalite nke ibe na-emepe, chọta bọtịnụ ahụ "Nkwado na ndị ọkwọ ụgbọala".
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịkọwapụta ụdị ngwaọrụ a na-enyocha software ahụ. Enwere nhọrọ abụọ maka otu esi eme nke a: ị nwere ike ịde aha nlereanya nke onye nbipute ahụ na mpaghara mbụ, ma ọ bụ kọwaa ihe nlereanya ahụ site na iji mpempe akwụkwọ ndapụta pụrụ iche. Ekem pịa "Chọọ".
Na nsonaazụ ọchụchọ, họrọ ngwaọrụ gị.
Ngalaba nkwado nkwado nke ngwaọrụ multifunction anyị ga-emeghe. Ebe a ị ga-ahụ taabụ ahụ "Ndị ọkwọ ụgbọala, ndị ọrụ"n'ime nke ị ga-ezipụta usoro sistemụ nke a ga-arụnyere software. Mgbe ịmechara nke a, ngwanrọ maka nbudata ga-apụta. Ịkwesịrị ibudata ndị ọkwọ ụgbọala maka ma ọ bụ onye nbipute na nyocha. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ. Download ihu ihe ọ bụla.
Otu esi arụnye ngwanrọ ahụ, tụlee ihe atụ nke ọkwọ ụgbọala maka onye nbipute. Wepu ọdịnaya nke archive n'ime nchekwa dị iche ma malite usoro ahụ site na ịpị ugboro abụọ na faịlụ ahụ na mgbatị ahụ * .exe. Ntọala nke installer amalite window, ebe ịkwesịrị ịhọrọ ụdị nbipute - EPSON TX117_119 Usorowee pịa "OK".
Na windo na-esote, họrọ asụsụ mmepụta site na iji menu ọdịda pụrụ iche wee pịa ọzọ. "OK".
Mgbe ahụ ịkwesịrị ịnakwere nkwekọrịta ikike site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
N'ikpeazụ, chere ruo mgbe echichi zuru ezu ma malitegharịa kọmputa ahụ. Mbipụta ọhụrụ ga - apụta na listi ngwaọrụ ejikọrọ na ị ga - arụ ọrụ na ya.
Usoro 2: Ọchịchị ọhụụ ọkwọ ụgbọala nyocha
Usoro nke a, nke anyị ga-atụle, a na-asọpụrụ site na ntụgharị ya - site n'enyemaka ya ị ga-enwe ike ibudata ngwanrọ maka ngwaọrụ ọ bụla nke chọrọ imelite ma ọ bụ wụnye ndị ọkwọ ụgbọala. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ nhọrọ a, n'ihi na nchịkọta software dị kpamkpam: otu ihe omume pụrụ iche na-enyocha usoro wee họrọ software maka ụdị nke OS na ngwaọrụ. Ị ga-achọ naanị otu ịpị, mgbe nke a gasịrị, nrụnye ngwanrọ ga-amalite. Enwere ọtụtụ mmemme ndị dị otú ahụ ma ị nwere ike ị mara onwe gị na ndị kasị ewu ewu site na njikọ dị n'okpuru:
Otu ihe omume dị mma nke dị otú a bụ Ọkwọ ụgbọala Booster. Na ya, ị nwere ike iburu ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ ọ bụla na Os ọ bụla. Ọ nwere interface doro anya, n'ihi ya enweghi ihe isi ike na iji ya. Ka anyị leba anya otu esi arụ ọrụ na ya.
Na akwukwo ọrụ akwukwo, budata usoro ihe omume a. Ị nwere ike ịga na isi iyi ahụ site na njikọ nke anyị hapụrụ na nyocha akụkọ banyere usoro ihe omume ahụ.
Gbaa onye nkwụnye ihe ebudatara na isi windo pịa bọtịnụ ahụ. "Nabata ma wụnye".
Mgbe echichi, usoro ntanetị ga-amalite, bụ mgbe a ga-amata ngwaọrụ niile a chọrọ imelite ma ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọala arụnyere.
Ka usoro ihe omume ahụ wee chọpụta onye nbipute ahụ, jikọọ ya na kọmpụta n'oge iṅomi.
Na njedebe nke usoro a, ị ga-ahụ ndepụta na ndị ọkwọ ụgbọala niile dị maka ntinye. Chọta ihe na ngwa nbipute gị - Epson TX117 - ma pịa bọtịnụ ahụ "Nwee ume" emegide. Ịnwekwara ike iwunye ngwanrọ maka ngwaọrụ niile n'otu oge, naanị site na ịpị bọtịnụ ahụ. Melite niile.
Mgbe ahụ nyochaa ntinye arụmọrụ software wee pịa "OK".
Chere ruo mgbe arụnyere ndị ọkwọ ụgbọala ma malitegharia komputa gị maka mgbanwe ndị ị ga-eme.
Usoro 3: Wụnye software site na ID ngwaọrụ
Ngwaọrụ ọ bụla nwere ihe nchọpụta pụrụ iche nke ya. Usoro a na-agụnye iji ID a chọọ ịchọ ngwanrọ. Ị nwere ike ịhụ nọmba achọrọ site na ilele "Njirimara" nbipute n'ime "Onye njikwa ngwaọrụ". I nwekwara ike were otu n'ime ụkpụrụ ndị anyị họọrọ maka gị n'ọdịnihu:
Ugbu a, pịnyere na uru a na mpaghara ọchụchọ na ọrụ Ịntanetị pụrụ iche nke pụrụ iche na ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala site na ID ngwaike. Jiri nlezianya gụọ ndepụta nke ngwanrọ dị maka MFP, ma budata nsụgharị ọhụrụ maka sistemụ arụmọrụ gị. Otu esi arụ ọrụ software, anyị weere na usoro mbụ.
Nzọụkwụ 4: Usoro usoro ihe niile
N'ikpeazụ, tụlee otú ị ga-esi wụnye software maka Epson TX117 na-enweghị iji ngwaọrụ ndị ọzọ. Biko rịba ama na usoro a bụ nke kachasị dị irè niile a tụlere taa, ma ọ nwere ebe - a na-ejikarị ya eme ihe mgbe ọ bụla n'ime ụzọ ndị dị n'elu dị maka ihe ọ bụla.
Nzọụkwụ mbụ bụ imeghe "Ogwe njikwa" (jiri Search).
Na windo nke meghere, ị ga-ahụ ihe ahụ "Akụrụngwa na ụda"ma enwere njikọ na ya "Lee ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ". Pịa ya.
N'ebe a, ị ga-ahụ ndị niile na-ebi akwụkwọ a maara na usoro ahụ. Ọ bụrụ na ndepụta nke ngwaọrụ gị adịghị adị, wee chọta njikọ ahụ "Na-agbakwụnye onye nbipute" n'elu taabụ. Ma ọ bụrụ na ịchọta akụrụngwa gị na ndepụta, mgbe ahụ, ihe niile dị n'usoro na ndị ọkwọ ụgbọala niile dị mkpa dị ogologo oge, a debekwa ya.
Usoro nyocha usoro ga-amalite, n'oge a ga-amata ndị nzacha akwụkwọ niile. Ọ bụrụ na ị hụ ngwaọrụ gị na listi - Epson Stylus TX117, wee pịa ya wee pịazie. "Na-esote"ịmalite itinye software ahụ. Ọ bụrụ na ịchọtaghị onye nbipute gị na listi, wee chọta njikọ dị n'okpuru. "E depụtaghị ihe nbipute achọrọ" ma pịa ya.
Na windo na-egosi, lelee igbe ahụ "Tinye onye nbipute mpaghara" wee pịa ọzọ "Na-esote".
Mgbe ahụ ịkwesịrị ịkọwa ọdụ ụgbọ mmiri nke ejiri njikọ ngwaọrụ. Enwere ike ime nke a site na iji menu ndapụta pụrụ iche, ma ị nwekwara ike ịgbakwunye ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ugbu a, anyị ga-egosi maka ngwaọrụ anyị na-achọ ndị ọkwọ ụgbọala. N'akụkụ aka ekpe nke windo ahụ, rịba ama onye na - emepụta ya - n'otu n'otu Epsonna n'aka nri bụ ihe nlereanya Epson TX117_TX119. Mgbe emere, pịa "Na-esote".
N'ikpeazụ, tinye aha onye nbipute ahụ. Ị nwere ike ịhapụ aha aha, ma ọ bụ ịnwere ike itinye uru ọ bụla nke onwe gị. Wee pịa "Na-esote" - ntinye software ga-amalite. Chere ruo mgbe agwụla ma malitegharịa usoro.
Ya mere, anyị atụlewo ụzọ 4 dị iche iche ị nwere ike isi wụnye ngwanrọ maka ngwaọrụ Epson TX117. Ụzọ ọ bụla nke ụzọ ya dị irè ma bụrụ onye ọ bụla nwere ike ịnweta. Anyị nwere olileanya na ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla.